कलियुगका कुरा: भाङले थला पार्‍यो डेढ दिन
अस्ति गुरुकुलमा बसेर घोट्टा पिइयो। बाग्मति हो कि टुकुचे किनारबाट गाँजाको पात र मुन्टा सोहेरेर ल्याएछन् कलाकार साथीहरुले। मिक्सचरमा हालेर मस्ते लेदो बनाएछन्। दुधमा चिनी र गाँजाको पेस्ट पकाएका रहेछन्। खाइन्जेल त मिठै लागेको थियो, गुलियो- बाहुनलाई के चाहियो र। भाङ खाँदा लाउने रहनेछ भन्दै गफ दिदैं बसेको। अस्ति राति देखि लाउन थालेको हिजो दिनभर घरै सुतेर बित्यो।
घरी अरुले बोलेको कति ठूलो स्वरमा बोलेका होलान् जस्तो लाग्ने। घरी किन यस्तो सुस्तरी बोलेका होलान् जस्तो लाग्ने। छिन मै भएको कुरा कति न दुई दिन पहिला कुरा गर्‍या जस्तो लाग्ने। सबै कुरा एकदम ठूलो लाग्ने। एक जनाले अनुभव सुनाएको भाङ लाका दुई साथीभाइलाई एकजनाले तोरीको तेल कानमा हाल्यो भने छाड्छ भन्यो रे अर्काले ग्यालिन नै उठाएर घोत्याइदियो रे। किन भन्दा कानको प्वाल त गाग्रीको मुख झैं देख्याथो रे।
मैले नि अस्ति राति चन्द्रमा पृथ्वीबाट नजिक आएकाले हेर्न परो सुपर मुन भनेर हेरेको त पुरै झ्यालबाट छिर्न लाग्या जस्तो देखेर आत्तिएको थिएँ। तर अलि अलि रमाइलो पनि भयो। छिन मै चन्द्रमामा पुगेजस्तो छिन मै अमेरिकामा पुगेजस्तो भयो। जे सोच्यो त्यस्कै भिजुअल तुरुन्त दिमागमा आइरह्यो। भोक कतिसारो लागेको भने। जे खायो त्यही खाइरहुँ लाग्ने। एउटा चकलेट कहाँबाट भेट्टिएछ बजार गएर एक प्याकेट चकलेट एक्लै खाम जस्तो भइरह्यो। अहिले पनि छ्याङ्ग भइसक्या झैं मान्याछैन। भोक लागिरहेकै छ।
भाङ भनेको चाहिँ गाँजालाई घोटेर बनाउने हो कि के हो अझै बुझेको छैन। त्यो भाङ हो भने धतुरो खानेको हाल के होला ?
मञ्जरी March 21, 2011 at 5:05 PM
:)) मलाई पनि ट्रई गर्न मुन लाओ यो अनुभव सुनेर अब अर्को होली कुर्नु परो :)
Aakar March 21, 2011 at 6:06 PM
खुब हामीलाई फूर्ति दिँदै हिँडिया थियो नि !
Rabindra Singh Baniya March 21, 2011 at 10:35 PM
कत्ति न फुर्ती लाथेउ नि नक्कली पर्यो कि भनेर ...?? हाम्रो माल लाई नक्कली भन्ने देखेउ तीन लोक चौध भुबन ????